Fakkaattiin suurxiqqoo Barreessaa LibreOffice, Calc LibreOffice, Fakkaasaa LibreOffice fi galmeewwan Toleessaa LibreOffice keessa saagamuu ni danda'u.
Faayilicha fili. Sanduuqa Gosa faayilii keessa filannoo gara gosoota faayilii murtaa'aniitti daangessuu ni dandeessa.
Yoo geessituu gara faayilii xabboo barbaadde Geessituu cuqaasi.
Yoo sanduuqni Geessituu mallattaa'eera tahe, yeroo halle galmeen haaromsamu fi fe'amu fakkaattiin suurxiqqoo irra deebi'ee fe'ama. Ejjatoowwan gulaaluu kanneen ati garagalcha qe'ee fakkii galmicha keessatti adeemsifte irra deebiitiin fayyadamanii fakkaattichi ni agarsiifama.
Yoo sanduuqni Geessituu hin mallatteeffamne tahe, ati yeroo hundumaa garagalcha yommuu saxaatoon yeroo jalqabaaf saagame uumameetiin hojjetta.
Saxaatoo isa jalqaba akka geessituutti saagame ida'uuf, gara Gulaali- Geessituu deemiitii, qabduu Geessituu Cabsi cuqaasi.
Fakkatticha saaguufBani cuqaasi.
Sajoowwan kabala Fakkii irraa
Faayiliin fakkii xabboo gingilchaatiin jijjiiramuu dhiisuu ni danda'a. Gingilchaan fakkii galmee keessaa qofaatiif fayyadu.
Gingilchaan muraasni qaaqa, kan ati, fakkeenyaaf, jabina gingilchaa filachuuf itti fayyadamuu dandeessu, banu. Gingilchaa irra jireessi yeroo baay'ee galtee gingilchaa dabaluuf fayyadamuu ni danda'u.
Fakkaasaa LibreOffice fi Toleessaa LibreOffice keessatti, barruu fi saxaatoo ida'uu , wantoota kana suurxiqqoo waliin filachuu, fi filannoo akka fakkaattii suurxiqqoo haaraatti alerguu ni dandeessa.
Fakkicha mirga cuqaasiiti qaaqa amalootaa banuuf baafata xiqqaa irraa Fakkii fili.
Amaloota fakkii filatamee jijjiiriitii, TOLE cuqaasi.
Yoo dhangii kanneen akka GIF, JPEG yookiin TIFF tiin olkaa'uu barbaadde, fakkaattii suurxiqqoo filattee alerguu malta. Kuni Fakkaasaa LibreOffice fi Toleessaa LibreOffice keessatti qofa danda'ama.
Draw ykn Impress keessatti suurxiqqoo alerguu:
Fakkaatti suurxiqqoo filadhu. Wantoota dabalataa kanneen akka barruu, fakkaatticha waliin alergaman osoo filachaa jirtuu yookiin goodayyaa filannoo naannoo wantoota hundaa banuutiin furtuu shift dhiibuudhaan filachuu ni dandeessa.
Faayilii - Alergi fili. Qaaqni Alergi ni banama.
Ajajni Alerguu fakkicha galteewwan gingilchaa fayyadaman hundaa waliin gara faayiliitti barreessa. Ajajni Fakkii Akka Olkaa'i baafata harqalaa keessaa galteewwan gingilchaa kamiyyuu malee fakkicha olkaa'a, yoo fakkichi akka fakkii geessituutti saagame. Fakkiin idaatii yeroo hundumaa gingilchaatti fayyadamee olkaa'ama yookiin alergama.
Dirree Dhangii faayilii keessaa, dhangii faayilii barbaaddu filadhu, fakkeenyaaf GIF yookiin JPEG.
Yoo wantoota filataman qofa alerguu barbaadda tahe, sanduuqa Filannoo mallatteessi.
Yoo Filannoo hin mallatteefne tahe, fuulli waamara galmichaa alergama.
Faayilichaaf maqaa galchiiti Alergi cuqaasi.
Suurxiqqoo Barreessaa irratti alerguuf: Suurxiqqoo Mirga-cuqaasi, Saxatoo Olkaawwii filadhu. Qaaqa Saxatoo alergii argita. Maqaa faayilii galchii akaakuu faayilii filadhu.
Title is: Suurxiqqoo Saaguu, Gulaaluu, Olkaa'uu